Ngaphambi kokusebenzisa i-holly ash, kumele uthandaze kuqala, i-holly ash isentshenziselwa izifiso ezinhle kuphela, ungayisebenzisi uma uhlose ukudlala ngomuntu. Ngaphambi kokukhafula ngayo, kumele ubheke ngasendaweni evulekile, okungaba yi-window noma isicabha. Bese uthela i-holly ash esandleni sakwesokudla, ukhulume isifiso sakho. Emva kokukhuluma isifiso sakho, uzobe usuyaphephetha ngomkhulu umfutho. Uma ufuna ukwelapha umuntu nge-holly ash, lowomuntu kumele abe phakathi kwakho nendawo evulekile njenge-window nesicabha, uzobe usuyakhuluma isifiso sakho bese uyaphephetha uqondise kulowomuntu.
Lezinkolelo zisetshenziswa kwamanye amazwe, ake uzizame ubone ukuthi umahluko wemali uzowubona yini.
Imali Ibiza enye imali
Ungayiphiki imali, Yeka ukuthi awunamali, yeka ukuthi uyahlupheka. Kunesisho esithi “imali Ibiza enye imali”. Hlala unemali eningi emhlophe kwi-wallet yakho. Beka imali emhlophe eningi yonke indawo, endlini yakho yokulala, emotini, edeskini emsebenzini. Mina ekhaya lami ngino 2 litre ogcwele ama-coins amhlophe kuphela. Lemali oyibekayo izokubizela enye imali, uzobona u-wina, uzobona ubanenhlanhla yemali.
Uma uphuphe iphupho elinalokhu okulandela vuka uyodlala i-lottery noma uyogembula, noma iya ko-faka ama-cv kuma-company. Nansi i-list yezinto ezikhomba umcebo ephusheni: imali, ingulube, ubisi, uju lwezinyosi, igolide, inyama, ushukela, ibhubesi, indlovu, inkomo emhlophe, inyoka emhlophe.
Lindiwe Mayekiso 2020-09-08 19:36:40
Kudala ndizama mthandazi akude kulunge kakhulu kwisimo sezezimali